Zeziphi iimpembelelo kwiSigqibo seNtengo? | Martech Zone
Zeziphi iimpembelelo kwiSigqibo seNtengo?
NgoLwesibini, Aprili 23, 2013 Douglas Karr
Inzululwazi ngasemva xa abantu besenza isigqibo sokuthenga iyamangalisa. IBigCommerce yiSoftware eyaziwayo njengeNkonzo (i-SaaS) ecommerce kunye neqonga lenqwelo yokuthenga. IBigCommerce ikunika ubuninzi bezixhobo ze-e-commerce ezikhuselekileyo, kubandakanya iwebhusayithi, igama lesizinda, inqwelo yokuthenga ekhuselekileyo, ikhathalogu yemveliso, isango lokuhlawula, i-CRM, iiakhawunti ze-imeyile, izixhobo zokuthengisa, ukunika ingxelo kunye nevenkile elungiselelwe iselfowuni. Kutshanje kuphuhliswe i-infographic ebonelela ngeenkcukacha malunga nefuthe kwisigqibo sokuthenga.
Sigubungela izinto ezili-10 eziphezulu ezichaphazela isigqibo sokuthenga, ezona zinto zibalulekileyo kwiivenkile, ifuthe losasazo loluntu ekuthengeni nokunye. Ngokugxila kwimimandla efanelekileyo yeshishini lakho kunye nevenkile yakho, ungayenza ukuba ibe lula ngakumbi kubathengi, oko kuthetha ukuba uza kuthengisa ngakumbi. Yeyiphi le nto BigCommerce konke malunga.
tags: BigCommerceizintompe mbelelothengaisigqibo sokuthenga
Ukuqonda Ixabiso Lempembelelo
UphengululoInc: Ukubeka iliso, Ukuqokelela kunye nokwabelana ngoPhononongo lwe-Intanethi